Maxkamadda Darajada 1aad Garoowe oo Fasaxday 14 Eedaysane Alshabaab Lagu Tuhunsanaa (dhegayso) – Radio Daljir
Seteembar 18, 2017 12:49 b 0
Xeer ilaaliyaha guud ee Puntland oo aanu ka waraysay dad lagu Tuhmay Alshabab oo Maxkamada Darajada Koowaad ee Garoowe ay Xoriyadoodi siisay.
Xeer ilaaliyaha Guud ee Puntland Maxamuud Xasan Aw Cismana ooo Waraysi gaar ah Siiyay Radio Daljir ayaa ka warbxiyay xaalada guud ee Garsoorka Puntland. Xeer Ilaaliyaha ayaa si gaar ah uga warbxiyay 14 qof oo Soomali ah oo laamaha ammaanka Puntland ay bil kahor ka soo qabteen deegaanka Cuun laguna waayay danbiyadii lagu soo eedeeyay kuwaas oo qeyb xoriyadoodi la siiyay, qaybna ganaax lacag la duldhigay.
Xeer ilaahaya ayaa sidoo kale ka hadlay dhaawaca taliyihii Maxkamada Darajada Kooowaad oo xalay magaalada lagu dhaawacay iyo xaladiisa caafimaad.
CabdiXakiin Xuseen Xasan ayuu u waramay Xaar Ilaaliyuhu.